KMGWEB - kya hai khoj avishkar meaning in hindi loan chahiye 2019: नेपाल माँ ऑनलाइन पैसा कसरी कमाउने
नेपाल माँ ऑनलाइन पैसा कसरी कमाउने
नेपाल माँ ऑनलाइन पैसा कसरी कमाउने - नेपाल माँ ऑनलाइन पैसा कसरी कमाउने Nepal अनलाइन बाट पैसा कमाउने सजिलो माध्यम नेपाली भाषा मा कम मेहेनत मा धेरै पैसा online बाट कमाउने तरिका
तपाईलाई लाग्न सक्छ, किन किन्ने होस्टिङ ? जब कि सित्तैमा ब्लग चलाउँन पाइने साइटहरु धेरै छन् । हो, वर्डप्रेस, ब्लगस्पट जस्ता साइटहरुबाट सित्तैमा ब्लग चलाउँन सकिन्छ । गुगल नै गर्ने हो भने पनि डोमेनमा तिनको नाम नघुसाई (सित्तैमा ब्लग बनाउँन पाइने साइटहरुमा ब्लग बनाउँदा आफ्नो डोमेनको बिचमा तिनको नाम राख्नै पर्ने हुन्छ । जस्तै: example.wordpress.com वा example.blogspot.com आदि।) सित्तैमा होस्टिङ चलाउँन दिने साइटहरु पनि टन्नै भेटाइन्छन् । यति सजिलो हुँदा हुँदै पनि पैसा खर्च गरि गरि मानिसहरु किन किन्छन् होस्टिङ ? यसबारे जानकारी नै नभएर त पक्कै होइन । पैसा सस्तो भएर त झन् हुँदै होइन । खासमा कारण यस्तो हो |
एक पटक तलका बुँदाहरुको छलफल हेर्नुहोस् :
१. के हो होस्टिङ ? : सामान्यरुपमा बुझ्ने हो भने होस्टिङ भनेको इन्टरनेटको ढुकुटी हो । तपाईले ब्लग बनाउँनुको अर्थ भनेको के हो, सोच्नुहोस् त । लेख्नु, फोटो पोस्ट गर्नु या भिडियो राख्नु त हो नि, हैन र ? सम्झनुहोस् त, तपाईले लेखेका कुराहरु, पोस्ट गरेका फोटो तथा भिडियोहरु कहाँ बस्छन् ? इन्टरनेटमा नभन्नु नि । इन्टरनेटमा देखिने सबै कुराहरु कतै राखिएकै हुन्छन् । कतै राख्नु नै पर्ने भएपछि यसका लागि ठाउँ चाहिने भो पक्कै । हो, त्यही कुराहरु राख्नका लागि इन्टरनेटमा किनिने ठाँउ या स्पेस नै वेब होस्टिङ सेवा हो । यसलाई हामी सजिलो पारामा होस्ट गर्ने वा होस्टिङ भन्दछौँ । होस्टिङ बेच्ने धेरै कम्पनिहरु छन् । तपाईले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा छानी छानी होस्टिङ किन्न सक्नु हुनेछ । होस्टिङ एमबि (MB), जिबि (GB), टिबि(TB) आदिमा नापिन्छ । यसरी यति स्पेस भनेर किनिने होस्टिङ लिमिटेड होस्टिङ स्पेस हो । तर सस्तो मुल्यमा अनलिमिटेड होस्टिङ स्पेस दिने कम्पनीहरु पनि छन् । यसैले आजभोली लिमिटेड होस्टिङ लिने केहि कम नै होलान् ।
२. किन किन्ने होस्टिङ ? : किन किन्ने भन्ने प्रश्नको एउटै जवाफ हो, सित्तैको बेसारले पखाला चलाउँछ । सित्तैको होस्टिङमा हुने खराबी र कमजोरीका बारेमा थाहा पाएपछि तपाईले आफ्नै बुझ्नु हुनेछ, िकन किन्ने होस्टिङ भनेर ।
१. बिचमा तिनीहरुको नाम घुसाएर बनाइने ब्लग वा वेबसाइट :
वर्डप्रेस र ब्लगस्पटले सामान्य ब्लग चलाउँनका लागि राम्रो सुविधा दिएका छन् । तर तपाईले यीनीहरुबाट ब्लग चलाउँदा आफ्नो ब्लगको नाममा यीनीहरुको नाम पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै वर्डप्रेसमा यो ब्लग भएको भए www.kmgweb.wordpress.com र ब्लगस्पटमा भएको भए www.kmgweb.blogspot.com हुने थियो । यति लामो नाम भिजिटरहरुलाई सम्झन पनि गाह्रो हुन्छ भने इन्टरनेटमा भएका ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा यस्ता सित्तैका साइटहरु स्पाम हुन्छन् भन्ने अध्ययनले पनि देखाएका छन् । यति लामो नाम त साथीहरुलाई मेरो ब्लग छ, हेर् है भन्न पनि झ्याउ नै हुन्छ नि । अझै पनि नाममा के नै राख्या छ र भन्ने शेक्सपियरकै चेलो हुनु हुन्छ भने पनि याद गर्नुहोस्, सित्तैमा पाइने यस्ता ब्लगहरु तपाईले चाहे जस्तो बनाउँन सक्नुहुन्न । उनीहरुले तोकेको निश्चित परिधिमा भने तपाई बाँधिनु हुन्छ । यसका अतिरिक्त तपाईले लेखेको र पोस्ट गरेका कुराहरु सँधै तपाईको नहुन सक्छन् । तपाईले थाहै नपाई ति कन्टेन्टहरु डिलिट गरिएको हुन सक्छ । तपाईको पुरै ब्लग डिलिट गर्ने अधिकार पनि उनीहरुमा हुन्छ ।
2 तिनको नाम नघुसाई पाइने सित्तैको होस्टिङ
यसमा बनाइएका साइटहरु पैसा नतिरि बनाएको हो भन्ने कसैले थाहा पाउँदैन, जब सम्म तपाईको साइटको विस्तृत अध्ययन गरिन्न । तर यो आवरण मात्रै हो । सित्तैमा पाइने यस्ता होस्टिङमा तपाईले चाहे जस्तो साइट वा ब्लग बनाउँन सक्नुहुन्न । किनभने उनीहरुले तोकेको निश्चित परिधिमा भने तपाई बाँधिनु पर्ने हुन्छ । जम्मा यति एमबि कन्टेन्ट राख्न पाउँने वा यति वटा फाइलमात्र राख्न पाउँने, ब्यान्डविथ यति जस्ता कुराले तपाईलाई खुलेर त्यसको प्रयोग गर्न दिदैन । कम ब्यान्डविथ भयो र तपाईको साइट धेरैले हेर्न थाले भने not found भन्न थालिहाल्छ । यसका अतिरिक्त तपाईले लेखेको र पोस्ट गरेका कुराहरु सँधै तपाईको नहुन सक्छन् । तपाईले थाहै नपाई ति कन्टेन्टहरु डिलिट गरिएको हुन सक्छ । उनीहरुले भनेको नियमभन्दा अलिकति तलमाथि भए तपाईको पुरै ब्लग डिलिट गर्ने अधिकार पनि उनीहरुमा हुन्छ ।
सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने सित्तैको ब्लग चलाउँनु भनेको अर्काको घरमा भाडा कोठा लिएर बसे जस्तो हो । जहाँ बसुञ्जेल तपाईले आफुलाई कहिलै सुरक्षित पाउँनु हुन्न भने यस्तो ब्लगमा ब्याकअप राख्ने सुविधा नभएका कारण तपाई त्यो ब्लगबाट निस्किदा एउटा कुरा बाहेक अरु केहि लिएर निस्किन पाउँनु हुन्न । त्यो एउटा कुरा हो, सित्तैमा ब्लग चलाउँन नहुने रै छ भन्ने अनुभव । होस्टिङ किनेर ब्लग चलाउँनु भनेको चै आफ्नै घडेरी किनेर घर बनाउँनु जस्तै हो । पछि मन परेन भने ब्याकअप लिएर थपक्क अर्कोमा सर्दा सर्लक्कै आफ्नो ब्लग सार्न सकिन्छ जुन दुरुस्तै हुन्छ ।
अनि अन्तिममा, अचेल ब्लगस्पटमा ब्लग वा साइट बनाएर त्यसलाई डोमेनमा रिडाइरेक्ट गरेर चलाउँने किफायती चलन पनि खुब चलेको छ । जस्तै: यसका लागि तपाईले ब्लगस्पटमा गएर www.example.blogspot.com भन्ने ब्लग बनाउँनुहुन्छ । र, यसलाई www.example.com मा रिडाइरेक्ट गर्नुहुन्छ । तपाईले सबै पोस्टहरु example.blogspot.com मा गर्ने भएपनि देख्दा example.com देखिने भएकाले भिजिटरले सामान्यतया थाहा पाउँदैनन्, नाम भन्न पनि सजिलो हुन्छ । तर यो तिनको नाम बिचमा घुसाएर सित्तैमा चलाइने ब्लग वा साइट नै हो । मात्र तपाईले डेरामा बसेको घरलाई आफ्नै घर हो भनेर मान्छेहरुलाई झुक्याइरहनु भएको छ । व्यवसायिक ब्लगर हुन वा लामो समयसम्म ब्लगिङ गर्नका लागि भने सित्तैका होस्टिङ र ब्लग छोडेर आफ्नै होस्टिङ लिन अनिवार्य छ । होस्टग्याटर , ब्लुहोस्ट वा आइपेजले सस्तोमा राम्रो सेवा उपलब्ध गराउँछन् । बेला बेलामा आउँने यीनीहरुको अफर पर्खिने हो भने त झन् अति नै कम मुल्यमा अत्यन्तै राम्रो होस्टिङ सुविधा लिन सकिन्छ ।
बोनस टिप्स : यदि तपाई एडसेन्स नै प्रयोग गर्नका लागि ब्लग वा वेबसाइट बनाउँन चाहनु हुन्छ भने आफ्नै होस्टिङ नै प्रयोग गर्न म सिफारिस गर्छु । जस्तै तपाईले ब्लगस्पटमा ब्लग बनाएर एडसेन्स प्रयोग गर्ने विचार गर्दैहुनुहुन्छ भने सित्तैमा पाइन्छ । तर सम्झनुहोस् त, तपाईको ब्लगमा एडसेन्स एकाउन्ट ब्लक भयो वा डिसएबल भयो भने के गर्नुहुन्छ ? फेरि अर्को ब्लगस्पट सुरु गर्ने नि, हैन ? तर अघिल्लो ब्लगको कन्टेन्ट, तपाईले दुख गरेको आउँन थालेका भिजिटर, पेजर्याङ्क, डिजाइन सबै गुम्छन् । तर होस्टिङ किनेर ब्लग बनाउँनु भयो भने साइट वा ब्लग एडसेन्सले ब्लक वा डिस्एबल जे गरे पनि त्यही कन्टेन्ट, डिजाइनमा अर्को त्यस्तै ब्लग बनाउँन सकिन्छ र फेसबुक आदिमा तपाईले राखेका पुराना लिंकहरु स्वत: नयाँ ब्लगमा पुग्ने बनाउँन सकिन्छ । यसबाट तपाईले पुराना सबै कुराहरु यथावत् पाउँनु हुन्छ । फेरि नयाँ दुख गर्नु पर्दैन